Shina Fangalarana Fandrihana milina fanapoahana baomba vita any Shina | Ding Tai
Ny tena mampiavaka ny masinina dia:
1. Ny masinina dia tsy misy rafitry ny lavaka, mora apetraka ary mampihena ny vidin'ny fampiasam-bola;
2. Ny firafitra mandaitra, kalitao fanadiovana tsara, asa azo antoka sy azo antoka, fandidiana milamina;
3. Ny fampiasana ny famolavolana kambana tokana, ny iray tokana amin'ny asa, ny iray hafa amin'ny fangalarana ivelany sy ny asa enti-miasa. (ny fihodinana tokana tsy manana io fiasa io)
4. Ny fihantonana dia manana hery telo amin'ny fisandratana, fandehanana ary fihodinana anaty anatiny.
Karazan-javatra maro hafa, antonony sy batch amin'ny fanariana sy fanadinoana ireo faritra ary manadio ny faritra amin'ny fanadiovana ny tarehy na fanamafisana, indrindra amin'ny fiantraikan'ny faritra manify manda manify na manamafy kokoa.
Previous: Rotary milina fipoahana rotaka latabatra
Manaraka: Mamatsy fividianana milina fanamiana singa
tifitra Peening Machine, nitifitra fatratra Spare Parts, Masinina fipoahana baomba, Fanapoahana tsiro, H miendrika basy mitifitra, Kodiarana fanapoahana tifitra, Ny vokatra rehetra